Firefox Relay, yatobuda mubeta, inosanganisira mabasa matsva ekubhadhara | Linux Addicts
Firefox Relay inobuda mubeta, uye inouya nesarudzo nyowani dzinowanikwa chete nekunyoreswa
Ndinofunga kuti hachisi chakavanzika kuti hapana anoda SPAM. Kana paine chero munhu ane kukahadzika kudiki, isu tinofanirwa kuyeuka kuti muchiSpanish inoshandura setsamba zvisingadiwe, ndicho chikonzero, patinonyoresa kumabasa akawanda, tinozviita ne email iyo isiri iyo huru kuitira kuti isazadzwe nemashoko asingatipi chero chinhu. Nechikonzero ichi, makambani akaita seApple kana Mozilla akatanga huduma vanohwanda tsamba dzamambo, vachifonerana firefox relay chirevo chechipiri.
Firefox Relay yanga iri mubeta, zvirinani, kubva muna Chivabvu 2020, teki ichangobva kudonhedzwa, kureva kuti, yatove mushanduro yakagadzikana. Izvi zvakaziviswa mu chinyorwa izvo, zvisingaite, zvinoita sekunge zvakare kutungamira traffic uye kwandiri, panguva yekunyora, yakangozara zvishoma muFirefox neVivaldi. Asi nhau ndeyekuti vakaunzawo Firefox Relay Premium, iyo iyo vanobhadhara vashandisi vachawana sevhisi yakavandudzwa.
Firefox Relay Premium inobvumira mamwe maakas
"Mukati mechikamu chekuyedza beta, takanzwa kubva kuvashandisi vazhinji vaida mamwe maemail kero. Saka isu takasarudza kupa iyo Premium sevhisi apo vanyoreri vanogashira subdomain alias kuti vagadzire nhamba isina muganho yeemail aliases, semuenzaniso, coffeestore@yourdomain.mozmail.com kana yourfavoriteshoestore@yourdomain.mozmail.com; chidimbu chepaneru yeemail yako aliases; iyo sarudzo yekushandisa yako email aliases kupindura kune maemail zvakananga; uye rutsigiro rwevatengi kuburikidza nefomu redu rekuonana rinoshanda. Vanyoreri vePrimum vanogashirawo 150 kb yekunamatira iyo iripo kune vanyoreri vemahara.
Kune avo vasingazive izvo Firefox Relay inopa, ndizvo chaizvo zita rekuti tsamba ichatumirwa kwatiri kuishandisa. Semuenzaniso, kana ndikasaina sevhisi uye ndikashandisa pablinux@mozilla.com, maemail ese anoenda ikoko. Kana iyo sevhisi isina zvakanakisa vavariro, unogona zvakare kutumira maemail ekushambadzira kwatiri. Kana tikazviita kakawanda, inbox yedu inogara yakazara spam. Pfungwa yeRelay, senge yemamwe masevhisi akafanana, ndeyekuti isu tinoshandisa alias, imwe yavanozogamuchira nekuti iemail inoshanda uye yatinogona kugadzira mitemo mubasa redu reemail kana tikaona zvakakodzera. Neiyo Premium vhezheni isu tinogona kushandisa zvakatowanda aliases.
Kana iri mitengo, iri € 0.99 / $ 0.99. Kana isu tisingade akawanda maaliases, basa racho nderemahara uye inogona kuwanikwa kubva relay.firefox.com.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Firefox Relay inobuda mubeta, uye inouya nesarudzo nyowani dzinowanikwa chete nekunyoreswa
KDE Eco, pamusoro pekureruka, KDE ikozvino inoda kuti software yayo ive nehushamwari
Nezve BitTorrent protocol. Mamwe mashoko ekushanda kwayo